Eddie Frierson – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Trolls (2016) Unicode ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ဘာလဲ??????? အတုယောင်တွေပေါများတဲ့ ယခုခေတ်မှာတော့ စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုက ရှားပါလာပြီ ဟန်ဆောင်အပြုံးတွေ ဟန်ဆောင်နှစ်သိမ့်မှုတွေထဲက ပျော်ရွှင်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ လူသားတွေအတွက်တော့ နည်းပညာပစ္စည်းတွေသုံးပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ရှာဖွေနေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှလုံးသားဆိုတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ဖန်တီးမှုမပါတဲ့ နည်းပညာပစ္စည်းတွေက ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမပေးနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပျော်ရွှင်မှုကို ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ???? မနေ့က မမျှော်လင့်ပဲ ကြည့်မိတဲ့ Trolls ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ ရောင်စုံဆံပင်ရှည်လေးတွေရှိတဲ့ Trolls တွေရဲ့ အလုပ်ကတော့ သီချင်းဆိုမယ် ကမယ် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နွေးထွေးစွာပွေ့ဖက်မယ် ဒါသူတို့ရဲချစ်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ။ ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ Trolls တွေမှာ ရန်သူတွေရှိတယ် သူတို့က Bergens တွေပဲ သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကတော့ Trolls တွေကို စားခြင်းပဲ။ Bergens တွေရဲ့ ရန်ကလွတ်မြောက်ပြီး နှစ်၂၀ ကြာတဲ့အချိန် ကြီးကျယ်တဲ့ပါတီပွဲလုပ်တဲ့ချိန်မှာ Bergans တွေရဲ့ ဖမ်းဆီးချင်းကို ခံရတဲ့ Trolls တွေကို ပြန်လည်ကယ်တင်မယ့်သူက Trolls ...
IMDB: 6.5/10 62,118 votes
Tangled (2010) Unicode ဒီဇာတ်ကားကိုလဲ နာမည်ကျော်ကာတွန်းကားတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့Walt Disneyကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာက်ကားရဲ့ အစမှာတော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ မိဖုရားကြီးက ကလေးမွေးခါနီး အပြင်းအထန်နာမကျန်းဖြစ်တာကြောင့် အသက်ဆက်ရှင်ဖို့အတွက် ရွှေဝါရောင်နတ်ဆေးပန်းကိုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဘုရင်ကြီးက တပ်သားတွေ စေလွတ်ပြီးရှာခိုင်းရင်း စုန်းမကြီးက သူ့နုပျိုမှူကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် တယုတယသိမ်းထားတဲ့နတ်ပန်းကို ရဲမက်တွေက မတော်တဆတွေ့ပြီး ဘုရှင်ကြီးကို ဆက်သလိုက်ပါတယ်။ မိဖုရားကြီးက အဲဒီနတ်ဆေးပန်းကို စားပြီး ကျန်းမာလာတာကြောင့်ကလေးကို အဆင်ပြေပြေမွေးဖွားနိူင်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေဝါရောင်နတ်ဆေးပန်းရဲ့အစွမ်းတွေက မင်းသမီးလေးဆီကို သက်ရောက်ခဲ့ပြီး မွေးကတည်းကမှော်စွမ်းအားရှိတဲ့ ရွှေဝါရောင်ဆံပင်တွေနဲ့အတူ မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကလေးမွေးပြီးမကြာခင်မှာပဲ စုန်းမကြီးရောက်လာပြီးကလေးကိုခိုးကာ တောအုပ်ထဲက မျော်စင့်အမြင့်ကြီးပေါ်မှာပိတ်လှောင်ထားလိုက်ပါတယ်။ စုန်းမကြီးရဲ့ နုပျိုမှူတွေကမင်းသမီးလေးရစ်ပန်ဇယ်ရဲ့ မှော်စွမ်းအားရှိတဲ့ဆံပင်ပေါ်မှာမူတည်နေတာကြောင့် မင်းသမီးလေးကို ကြီးပြင်းအောင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးလေး ရစ်ပန်ဇယ် ကတော့ ရဲတိုက်မှာ တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်ရင်း စုန်းမကြီးကို အမေအရင်းလ့ိုထင်ပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်ကားရဲ့ အပြောင်းအလဲကတော့ နန်းတော်ထဲက သရဖူကို ခိုးရင်ထွက်ပြေးလာတဲ့ သူခိုး ရိုက်ဒါက ရဲတိုက်ထဲကို မတော်တဆရောက်လာတာရင်းမင်းသမီးရစ်ပန်ဇယ်ရဲ့ အကျပ်ကိုင်မှူကြောင့် သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကနေမင်းသမီးလေးမွေးနေ့ရောက်တိုင်း ပျော်ဆုံးခြင်းအမှတ်တရ ...
IMDB: 7.7/10 393007 votes
Frozen (2013) Unicode Arendelle နိုင်ငံက မင်းသမီးငယ်လေး Anna ဟာ သူ့အစ်မ Elsa ကို ညဘက်ကစားဖို့ သွားနှိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းသမီး Elsa မှာ ထူးဆန်းတဲ့ စွမ်းအားတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ နှင်းတွေ၊ ရေခဲတွေကို လိုသလိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ Elsa ဟာ သူ့ညီမလေးကို မတော်တဆ ရိုက်မိသွားပါတယ်။ Elsa မှာ ရှိနေတဲ့ စွမ်းအားတွေအကြောင်း ဘယ်သူမှမသိအောင် မိဘတွေက ဖုံးကွယ်ထားပြီး Elsa ရဲ့ စွမ်းအားတွေအကြောင်း Anna ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်ထဲက ပျောက်သွားအောင် Troll ခေါင်းဆောင်ကြီး Grand Pabbie ထံ သွားပြီး အကူအညီတောင်းရပါတယ်။ အကယ်၍ Elsa သာ Anna ရဲ့ နှလုံးသားနေရာကို ရိုက်မိသွားရင် နှလုံးခဲပြီး သေသွားနိုင်တယ်လို့ Grand Pabbie က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ ...
IMDB: 7.5/10 544420 votes